Al-Shabaab oo gaari aan xabaddu karin u adeegsatay is miidaamin | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo gaari aan xabaddu karin u adeegsatay is miidaamin
Kooxda Al-Shabaab ayaa gaari nuuca aan xabaddu karin ah u adeegsatay weerar is miidaamin ah duullaankii ay ku qaadeen Awdhiigle.
AWDHIIGLE, Soomaaliya - Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose, Cabduqaadir Sheekh Maxamed Nuur ‘Siidii’ ayaa sheegay in markii ugu horreeysay ay Kooxda Al-Shabaab weerar is miidaamin ah u adeegsatay gaari aan xabaddu karin, weerarkii Awdhiigle ee dhacay billowgii todobaadkaan.
Gudoomiyaha Gobolka oo socod ku maray goobaha ay wax ka dhaceen, ayaa saxaafadda u sheeay in gaari aan xabddu karin, SUV, oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay VBIED, oo qorshuhu ahaa in lagu dumiyo buunda Awdhiigle ay ka hor tageen Ciidamada Dowladda.
“Baabuur bulletproof ah oo nuuciisa lala yaabay ayay is miidaamin u soo adeegsadeen, waxayna doonayeen buudada Awdhiigle in ay gooyaan”, Ayuu yiri Cabduqaadir Sheekh.
Arrintaan ayaa abuureysa walaac cusub oo dhanka amniga ah, waxayna bannaanka keeneysaa dacaya amni iyo koontrool la’aanta gawaarida ceyn kaas ah ee Dowladda Fadaraalka Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya waana inay diiwaangelisaa oo ay la socotaa ganacsiga gawaaridan ceynkaan ah ee aan xabaddu karin, ka fiirsi la’aanta iyo ka war qab la’aanta ka ganacsiga gawaaridaan waxa ay Al-Shabaab u sahli doontaa sii kordhinta halista amni ay geystaan.